Zero၊ Android အတွက်အံ့မခန်းဖွယ်အခမဲ့ Launcher
Zero သည် Android အတွက်အံ့မခန်းဖွယ်အခမဲ့ Launcher ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် configuration options အပြင်အံ့ဖွယ်ကောင်းသောဂရပ်ဖစ်နှင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုများစွာကိုမပေးနိုင်ပါ။
ဒီနေ့ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အား Androids အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအခမဲ့ application တစ်ခုအားဖိုင်များအကြားဖိုင်များအလွယ်တကူဝေမျှနိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သူ့နာမည် XEN ။
Cyanogen သည် Nextbit အားကြေငြာပြီးထုတ်ကုန်များစွာမှအက်ပ်များနှင့်အချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်စည်းညှိနိုင်သည်
Nextbit သည် terminal နှင့်ထပ်တူပြုခြင်းအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခု ပြုလုပ်၍ ဒေတာနှင့်အက်ပ်များအားလုံးကိုစက်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့အလိုအလျောက်ထပ်တူပြုလိမ့်မည်
ဒီဂျစ်တယ် Dudz သည်သင့်ကိုအထင်ကြီးလောက်သည့် ၀ တ်စုံကိုဤဟယ်လိုဝင်းတွင်ကူညီလိမ့်မည်
မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းတွေဟယ်လိုဝင်းဝတ်စုံကိုအံ့သြသွားစေချင်သလား။ ဒစ်ဂျစ်တယ် Dudz သည်သင့်ဝတ်စုံကိုဖြည့်စွက်ရန်အသုံးပြုရန်အတွက်အကောင်းဆုံး application ဖြစ်သည်
နိုင်ငံပေါင်း ၂၅ နိုင်ငံသို့ Hangouts ဖြင့်အခမဲ့အသံဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုများ (၂၀၁၄ နှစ်ကုန်အထိပထမအကြိမ်မိတ္တူကူးခြင်းကိုအခမဲ့)
အခမဲ့သောအသံခေါ်ဆိုမှုများကို Hangouts ဖြင့်တိုးမြှင့်ခြင်းကိုဂူဂဲလ်ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွား ၂၅ ခုသို့ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခု၏ပထမဆုံးမိနစ်ကိုကြေငြာလိုက်သည်။
Android အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးချပရိုဂရမ်များ - ယနေ့ MyPlayer၊ သင်၏ Android အတွက်အကောင်းဆုံးသီချင်းဖွင့်စက်
ဒီနေရာမှာ MyPlayer, Android အတွက်အပေါ့ပါးဆုံးနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ဆုံးဂီတဖွင့်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ LG G2 ကိုကြိုးစားအသုံးပြုခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ၎င်းတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သော floating controls ပါဝင်သည်။
မျိုးဆက်သစ် MediaTek ပရိုဆက်ဆာများသည် 64-bit ဗိသုကာနှင့် LTE ဆက်သွယ်မှုကို ဦး တည်မည်ဖြစ်သည်
ဟယ်လိုအထူး: Photo montage ဟယ်လိုဝင်း
Photo Montage Halloween သည်ကြောက်စရာကောင်းသောဟယ်လိုဝင်းမင်း၏စိတ်ကူးများနှင့်အတူ ၀ တ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်။ Google Play စတိုးမှာရနိုင်တဲ့အခမဲ့ app တစ်ခု
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နှင့်ဘာစီလိုနာအသင်းအားကျွန်ုပ်တို့၏ Android မှအခမဲ့မည်သို့ကြည့်ရှုရမည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်ရှင်းပြသွားမည်ဖြစ်သည်။
အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်နှင့် AMOLED မျက်နှာပြင်များသည်စွမ်းအင်ကိုသက်သာစေပါသလား။
AMOLED ဖန်သားပြင်များကအသုံးပြုသောနည်းပညာသည်နက်ရှိုင်းသော pixel တစ်ခုစီကိုဖြစ်စေသည်။ အနက်ရောင်သည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုရပ်တန့်စေသည်။
လူတစ်ယောက်က NFC ချစ်ပ်တစ်ခုကိုသူ့လက်ထဲထည့်လိုက်သည်
အမေရိကန်လူငယ်တစ် ဦး ဖြစ်သော Robert Nelson သည်၎င်းနည်းပညာ၏အားသာချက်ကိုအသုံးချရန်ဘယ်ဘက်လက်ဝဲဘက်ရှိ NFC ချစ်ပ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်
ဖိတ်စာတောင်းခံသူများအဘို့အ Inbox ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
Inbox သည် Gmail inbox ထဲသို့ရောက်ရှိသည့်မေးလ်အားလုံး၏စီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်စေရန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလက်ထောက်တစ် ဦး အနေနှင့်လာသည်
Moto 360 ၏အသံအမိန့်အားလုံးသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီမှာ Moto 360 ရဲ့ voice command အားလုံးကိုတွေ့မြင်နိုင်အောင်ဒီဗီဒီယိုကိုကိုင်တွယ်စရာမလိုဘဲထားရှိသည်။ အချို့သောအသုံးဝင်သော command အချို့ရှိသော်လည်းတိုးတက်ရန်များစွာရှိသည်။
Paquito Mix စမတ်ဖုန်းအသစ်သည်အိမ်၏အသေးငယ်ဆုံးကိုရည်ရွယ်သည်
Imaginarium သည် Paquito Mix ကိုပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည် MagicOS X interface ကို အသုံးပြု၍ ကလေးသူငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်သည့် phablet ဖြစ်ပြီးသင်အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ကို configure လုပ်သည်။
အာရှမှာခေတ်မီတဲ့ယုန်များကိုသင်၏ဖုန်းများအတွက်အဖုံးအဖြစ်အသုံးပြုရန်ဖက်ရှင်ကျလာသည်။ ဒီကမ္ဘာကြီးဟာဘာအမှားလဲ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုအဲဒါကိုရှင်းပြပေးနိုင်မလား။
ပိုကောင်းတဲ့ကင်မရာ၊ သင့် Android အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာ
Better Camera သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android Terminal များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံကင်မရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းစည်းထားသည့် Android ကင်မရာတွင်အကောင်းဆုံးအကျိုးကိုရယူနိုင်သည်။
ဂူဂဲလ်ကသင်၏အီးမေးလ်များကိုစီမံရန်နည်းလမ်းသစ် Inbox ကိုတင်သည်
ဂူးဂဲလ်၏အီးမေးလ်အားလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်လောင်းကြေးအသစ်ကို Inbox ဟုခေါ်သည်
Android Wear အတွက်အသုံးဝင်သောအက်ပလီကေးရှင်းများ - ယနေ့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းပေးသူကိုတွေ့သည်
ယနေ့ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်သင့်အား Android Wear အတွက်အကောင်းဆုံးကြံ့ခိုင်ရေး application တစ်ခုဖြစ်သော Android Wear အတွက်၎င်း၏အမည်ဖြစ်သော Vimo Fitness နှင့်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
အီဘိုလာတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် Samsung ကစမတ်ဖုန်း ၃၀၀၀ လှူခဲ့သည်
အာဖရိကရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ ၆၀ တွင်ဖြန့်ဝေရန်စမတ်ဖုန်း ၃၀၀၀ ကို Samsung ကလှူဒါန်းခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Energy Wireless BT8 Noise Canceling ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါသည်
Energy Wireless BT8 Noise Canceling သည်စျေးကွက်ရှိ OS အားလုံးနီးပါးနှင့်ကိုက်ညီသောအရည်အသွေးမြင့် Bluetooth စတီရီယိုနားကြပ်များဖြစ်သည်။
Lenovo ကဒီခရစ်စမတ်အတွက်စပိန်နိုင်ငံမှာ Android တက်ဘလက်အသစ်ကိုပြသခဲ့တယ်
Lenovo သည်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် Yoga မိသားစု၏ Android တက်ဘလက်အဖြစ်အဆိုပြုချက် ၃ ခုယူဆောင်လာသည်
ဂူဂဲလ်ဒရိုက်နှင့် ၄ င်း၏ပစ္စည်းဒီဇိုင်းများမှာပျောက်ဆုံးနေသည်
Google Drive သည်၎င်း၏ပစ္စည်းဝေစုကိုမကြာမီရရှိမည်။ အခုအစမ်းကြည့်ပါ
အံ့ Android စရာကောင်းသည့် Android Apps: Flash, Gordon
Flash Gordon သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော Recovery ကိုထပ်ခါတလဲလဲသုံးစရာမလိုပဲ zip များကို flash လုပ်ခွင့်ပြုသည်
Samsung ရဲ့ innuendo: Samsung Galaxy Note4ပေါ်က Lollipop ကိုသေတ္တာထဲမှထုတ်လိုက်သလား။
Samsung Galaxy Note4၏ဓာတ်ပုံမှတစ်ဆင့် Note4အတွက် Lollipop ကိုချက်ချင်း update လုပ်ရန် Samsung မှအရိပ်အမြွက်ပြောကြားသည်။
L Camera ၏ကျေးဇူးကြောင့်သင်၏ဖုန်း၏ Android L နှင့်အတူသင့်ကင်မရာ၏အလားအလာကိုအသုံးချပါ
သင့်တွင် Android 5.0 L ရှိသည့်စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တစ်ခုရှိပါက L Camera ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ ၎င်းသည်ကင်မရာ၏အားသာချက်အပြည့်အ ၀ ရယူနိုင်သော application ဖြစ်သည်။
[APK] အလွန်ကောင်းမွန်သော CM11 Dialer ကို Android Kit Kat တွင်တပ်ဆင်ပါ
ဤတွင်သင့်တွင် Android Kit Kat၊ Stock Roms များ၌ပင်ထည့်သွင်းရန် Dialer CM11 ရှိသည်
၎င်းသည် Android 5.0 Lollipop ကင်မရာ၏အလားအလာဖြစ်သည်
Android 5.0 Lollipop ၏အဓိကအသစ်အဆန်းများထဲမှတစ်ခုမှာဤပုံရိပ်များတွင်တွေ့နိုင်သည့်အတိုင်းကင်မရာတိုးတက်မှုဖြစ်သည်။
Android 5.0 Lollipop Messenger application အသစ်ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ
Android ဗားရှင်းအသစ်၏ preview မှ Android 5.0 Lollipop Messenger အက်ပလီကေးရှင်း။
ယခုသင်တရားဝင်တရားဝင်နောက်ခံပုံများနှင့် Android 5.0 Lollipop ယူဆောင်လာမည့်အသံများကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်
Android 5.0 Lollipop သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအီစတာကြက်ဥကို Flappy Birds ဂူဂဲလ်ဗားရှင်းယူဆောင်လာသည်
Android ဗားရှင်းအားလုံးတွင်အီစတာကြက်ဥသို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့်အီစတာကြက်ဥပါဝင်ပြီး Android 5.0 Lollipop သည်လျော့နည်းတော့မည်မဟုတ်ပါ။
[APK] Google Play Games Android 5.0 Lollipop « Material Design »၏မူကွဲအသစ်ကို ကူးယူ၍ တပ်ဆင်ပါ။
ဒီနေရာတွင် Nexus 2.1 ၏ Android 5.0 Lollipop ၏စက်ရုံပုံမှတိုက်ရိုက်ယူထားသော Google Play Games5ဗားရှင်းအသစ်ကိုသင်တွေ့ရသည်။
Android လိုမျိုး multi-operator SIM ကိုစဉ်းစားသင့်ပါသလား။
မနေ့က Apple ပြသခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုကအော်ပရေတာ SIM ကဒ်အလွတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ Android ကအလားတူစဉ်းစားသင့်ပါသလား ဖြစ်နိုင်မလား?
iPhone6သည်ကွေးပြီးနောက်မီးစတင်လောင်တော့သည်
မတော်တဆမှုတစ်ခုအပြီးတွင်အလွန်အမင်းကွေးပြီးသည့်နောက်၊ iPhone6သည်စတင်လောင်ကျွမ်းလာပြီး၎င်းကို ၀ တ်နေသူကိုဒုတိယအဆင့်မီးလောင်စေသည်။
Sony Xperia Z4 နှင့်ပတ်သက်သည့်ပထမဆုံးကောလာဟလများမှာ 2K မျက်နှာပြင်ပါသည့်သားရဲတစ်ကောင်ကိုပြသထားသည်
Sony Xperia Z4 တွင် Qualcomm Snapdragon 810 ပရိုဆက်ဆာတပ်ဆင်နိုင်သည်ဆိုသောကောလာဟလများထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ပထမဆုံးတရားဝင်တရားဝင် Android Lollipop နောက်ခံပုံများနှင့်အချို့သောအရာများကိုကူးယူပါ
ပထမဆုံးတရားဝင် Android Lollipop နောက်ခံပုံများအပြင် Lollipops နှင့်ပတ်သက်သောအထူးအပိုဆောင်းကို download လုပ်ပါ
Nexus6နဲ့ Samsung Galaxy Note4တို့အကြားနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် Phablets နှစ်ခုလုံးရဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကိုပြသထားပါတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲကိုဘယ်သူနိုင်မှာလဲ။
Motorola Turbo Charger သည်စမတ်ဖုန်းကို ၁၅ မိနစ်အတွင်းအားသွင်းရန်ကတိပြုထားသောဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်
တရားဝင် Sony ၏နောက်ဆုံးသတင်းများ - Xperia Z စီးရီးအားလုံးအတွက် Android 5.0 Lollipop
တရားဝင် Sony update များစာရင်းတွင် Xperia Z အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးအတွက် Android 5.0 Lollipop ကိုအကြီးအကျယ်မွမ်းမံမှုကြောင့်အံ့သြဖွယ်ရာတွေ့ရှိရသည်။
SMS / MMS မက်ဆေ့ခ်ျများအတွက် Android Lollipop အက်ပလီကေးရှင်းသစ်
Messenger for Android Lollipop ဟုခေါ်သောအက်ပလီကေးရှင်းသည် SMS နှင့် MMS စာတိုများကိုကိုင်တွယ်ရန်တစ်ခုတည်းသောလုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသည်
တရားဝင် Samsung မွမ်းမံသည်
ဤတွင်သင့်တွင်တရားဝင် Android Updates စာရင်း Android 4.4.4 Kit Kat ရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ မှန်ကန်စွာဖတ်ရှုပြီး Android 4.4.4 Kit Kat မဟုတ် Android 5.0 Lollipop ။
Android Lollipop အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အားလုံး
Android Lollipop ကိုယမန်နှစ်က Google မှပြုလုပ်ခဲ့သည့်အကြီးမားဆုံး update ဖြစ်သည်
Motorola မှ Android Lollipop သို့တရားဝင်အသစ်ပြောင်းခြင်းများစာရင်း
ဤတွင်သင့်ကို Android Lollipop လက်ခံရရှိမည့်ပထမဆုံး Motorola terminal ၏စာရင်းကိုချန်ထားပြီ။
Android L သည်နောက်ဆုံးတွင် Lollipop ဖြစ်ပြီးနောက်အပတ်အနည်းငယ်အတွင်းတွင်ရောက်ရှိမည်
နောက်ဆုံး L ၏ Android L သည် Lollipop ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ချိုမြိန်သော Android 5.0 ဗားရှင်းဖြစ်ပြီးနောက်လာမည့်နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်မှစတင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖြစ်နိုင်သည့် Nexus6နှင့် Nexus9တို့၏စျေးနှုန်းများကိုစစ်ထုတ်ထားသည်
Nexus6နှင့် Nexus9တို့၏ဈေးနှုန်းများမှာ Google မှတရားဝင်အတည်ပြုချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေရပြီဖြစ်သည်
Android Wear နှင့်အတူဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးစမတ်နာရီ Moto 360 ၏သုံးသပ်ချက်
Moto3ကို ၃ ပတ်ကြာစမ်းသပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Motorola စမတ်နာရီသစ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
Motorola သည်ဂူးဂဲလ်မှဝယ်ယူပြီးသည့်နောက်တွင် tablet များပြန်လည်ထုတ်လုပ်မည်
Lenovo ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က Motorola ကို ၀ ယ်ယူပြီးသည့်အခါ၊ ထုတ်လုပ်သူသည်တက်ဘလက်ကဏ္ return သို့ပြန်သွားလိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်
Android နှင့်ပတ်သက်သောဗွီဒီယိုအသစ် ၃ ခု၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောလျှို့ဝှက်ချက်နှင့်ဆောင်ပုဒ်အသစ်တို့ -“ အတူတူပါ။ အတူတူမဟုတ်ဘူး»
လူတိုင်းအတွက် Android ဖုန်းဗီဒီယိုနှင့်ဆောင်ပုဒ်အသစ် ၃ ခု
Android အတွက် Facebook အတွက်စတစ်ကာများကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စတိုးဆိုင်တွင်ရရှိနိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုကောင်းမွန်သော repertoire တစ်ခုရရှိနိုင်သည်
သူတို့က Windows 95 နဲ့ Doom ကို Samsung Gear Live မှာအလုပ်လုပ်စေတယ်
လူငယ်ဟက်ကာတစ် ဦး သည် Windows 95 နှင့် Doom ဂိမ်းကို Android Gear ဖြင့် Samsung Gear Live တွင်အတုယူနိုင်ခဲ့သည်။
Zeiss သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် virtual reality မျက်မှန်များကိုပြသသည်
Zeiss သည် ၄.၇ မှ ၅.၂ လက်မအကြားရှိမည်သည့်စမတ်ဖုန်းနှင့်မဆိုတွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော virtual reality မျက်မှန်များဖြစ်သော Zeiss VR One ကိုပြသခဲ့သည်။
Samsung Protection Plus, ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူများထံမှစမတ်ဖုန်းများအတွက်အာမခံ
Samsung Protection Plus Mobile Elite သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူမှပေးသော Galaxy S4 / S5 နှင့် Galaxy Note 3/4 အတွက်အာမခံဖြစ်သည်။
ZTE စပိန်နိုင်ငံက၎င်း၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှစမတ်ဖုန်း ၂၀ ကိုလုယူ
ZTE စပိန်နိုင်ငံမှ၎င်း၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှနို ၀ င်ဘာလ ၃၀ ရက်အထိ Facebook တွင်ပါ ၀ င်သူအားလုံးအတွက်အရည်အသွေးကောင်းစမတ်ဖုန်း ၂၀ ကိုပေးအပ်မည်
Umi Zero သည် Super AMOLED မျက်နှာပြင်နှင့် ၈-core ပရိုဆက်ဆာနှင့်ယူရို ၂၅၀ အောက်သာရှိသည်
ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Super AMOLED မျက်နှာပြင်နှင့်၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းဖြစ်သောယူရို ၂၄၀ နှင့်ထူးခြားသည့်တကယ့်အစွမ်းထက်သောစမတ်ဖုန်း UMi Zero ကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။
တောင်ကိုရီးယားအစိုးရ၏စောင့်ကြည့်မှုကိုလူ ဦး ရေကတယ်လီဂရမ်ကိုတပ်ဆင်စေသည်
တောင်ကိုရီးယားအစိုးရ၏စောင့်ကြည့်မှုပြproblemsနာများကြောင့်ဤနိုင်ငံသားများသည်သူတို့၏ "လျှို့ဝှက်စကားပြောခန်းများ" ကိုသုံးရန် Telegram ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
iPhone6ပြbနာကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ရှိပြီးသားဖြစ်သည် Uri Geller က၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်
iPhone6ပြbနာကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့မှာရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ Uri Geller ၏ရှင်းပြချက်
Samsung Galaxy Note4၏ multitasking လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြသသည့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုထုတ်ဝေသည်
multitasking ပြုလုပ်ခြင်းသည် Samsung Galaxy Note4တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို Samsung ပြသခဲ့သည်
OnePlus One ကို RAW format၊ multitouch ပြproblemနာဖြေရှင်းနည်းနဲ့အခြားအရာတွေကို support လုပ်တယ်
OnePlus One သည် touch screen သို့ဖြေရှင်းချက်၊ ROW mode တွင်ဖမ်းယူမှုများနှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့အရေးကြီးသောတိုးတက်မှုများကိုဆောင်ကြဉ်းပေးသည့်အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်ကိုလက်ခံရရှိသည်။
WhatsApp ကို Facebook မှ ၀ ယ်ယူမှုအတည်ပြုထားပြီးစုစုပေါင်းယူရို ၁၅ ဘီလီယံကိုထုတ်ပေးသည်။
အသုံးပြုသူနှစ် ဦး လျှင်တစ်ယောက်သည်ပျက်စီးသွားသောစမတ်ဖုန်းတစ်ခုရှိသည်
စမတ်ဖုန်းများ၏သက်ရောက်မှုနှင့်ကျဆင်းမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည်နောက်ဆုံးပေါ် Zagg အစီရင်ခံစာကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်တွင်ဖြစ်သည်
Chromecast ကို Sony Xperia Z3 နှင့် Xperia Z3 Compact တွင်တွေ့ရသည်
Google က Sony Xperia Z3 နှင့် Z3 Compact အပါအ ၀ င် Chromecast-လိုက်ဖက်တဲ့ကိရိယာများကိုအသစ်တင်လိုက်သည်
စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် Nokia HERE Maps APK အသစ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ [UPDATE]
HERE Maps APK အသစ်သည်ယေဘူယျအားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောဗားရှင်းကိုပေးသည်
AnTuTu မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Sony Xperia Z3X ၏ဂျပန်နည်းပညာထုတ်လုပ်သူနောက်တီတန်၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါပြီ။
Samsung Galaxy Note4သည်ဈေးကွက်သို့မဝင်မီညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတစ်ထောင်ခံစားခဲ့ရသည်
Samsung Galaxy Note4တွင်ခုခံအားစစ်ဆေးမှုကိုသင်တွေ့ရမည့်ဗီဒီယို
ကျွန်ုပ်တို့သည် Motorola Moto X 2014 အသစ်ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ခဲ့သည်
သင့်အတွက်ကောင်းမွန်သောနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာရှုထောင့်များကိုပြောပြရန် Motorola Moto X 2014 အသစ်ကိုသင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည်။
selfie အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော Samsung Galaxy Grand Prime
selfie ချစ်သူများအတွက်စံပြစမတ်ဖုန်း Samsung Galaxy Grand Prime ကို Samsung ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
[APK] IdeaDesktop Launcher၊ Android 4.0 နှင့်အထက်အားလုံးအတွက် Lenovo's Launcher
မည်သည့် Android 4.0 နှင့်အထက်မဆိုတပ်ဆင်မှုအတွက် Lenovo Launcher XDA ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Google+ သည်အသက်နှင့်တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ အကြောင်းအရာများကိုမည်သူကြည့်ရှုနေသည်ကိုကန့်သတ်ခွင့်ပြုသည်
ဂူဂယ်လ်ကသင့်အား Google+ ပေါ်ရှိအကြောင်းအရာများကိုအသက်နှင့်တည်နေရာအားကန့်သတ်ရန်ခွင့်ပြုသည် privacy များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောနည်းလမ်း
Ello သည်အင်တာနက်ကိုလွှမ်းမိုးနေသော Facebook ဆန့်ကျင်ရေးလူမှုကွန်ယက်
Ara ပရောဂျက်တွင်ပြုပြင်ထားသော Android L ဗားရှင်းရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် modules များကိုပြန်လည်ပြုပြင်စရာမလိုဘဲပြောင်းလဲနိုင်သည်
Modified Android L သည် Ara project ၏ terminal software အတွက်အခြေခံဖြစ်သည်
Samsung Galaxy Note4တွင်ထုတ်လုပ်မှုချို့ယွင်းချက်များရှိပါသလား။ Samsung မှာကိုယ်ပိုင် #bendgate ရှိမလား။
Samsung Galaxy Note4ကို ၀ ယ်ယူသောသုံးစွဲသူများစွာသည်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြproblemsနာများရှိသည်ဟုသတင်းပို့ကြသည်
Movistar သည် VIVE ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းတွင်ဖုန်းနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းများကို 4G နှင့်အများဆုံးကစားသူများအဖြစ်သက်တမ်းတိုးခဲ့သည်
Movistar သည် VIVE ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်ကန်ထရိုက်များထပ်မံသက်တမ်းတိုးသည့်ပုံစံ ၄ မျိုးဖြင့်စတင်ခဲ့သည်
MW 360 smartwatch ဘက်ထရီသက်တမ်းမှာ KGW42R update နှင့်နှစ်ဆဖြစ်သည်
KGW42R update သည် Moto 360 ၏ပတ်ဝန်းကျင်အသုံးစနစ်ကိုပိတ်ထားပါကဘက်ထရီသက်တမ်းကိုနှစ်ဆတိုးစေသည်။ နာရီ ၃၀ အထိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနိုင်သည်
Google က Android Auto UI ကိုပြတယ်
Android Auto သည်သန့်ရှင်းပြီးရှင်းလင်းသောသုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်ဖြင့်ထင်သည်ထက်စောလျင်စွာယာဉ်များသို့လာမည်
ပုံရိပ်အသစ်များနှင့် Oppo N3 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ
Oppo N3 ၏ပြန်ဆိုချက်အသစ်နှစ်ခုသည် Oppo အထင်ကရအသစ်၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများအပြင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်
Samsung MultiXpress, Android နှင့်အတူ multifunction ပရင်တာအသစ်များ
Samsung သည် Android operating system အနေဖြင့်ထူးခြားသော multifunctional printer များ Samsung MultiXpress ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Samsung Galaxy A7 ၏တည်ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်
မူလကထွန်းသစ်စစျေးကွက်များအတွက်ရည်ရွယ်ထားသည့် Samsung A A series ကိုဖြည့်စွက်ရန်ရောက်လာမည့် Samsung Galaxy A7 မှအချက်အလက်အသစ်များ။
Android အတွက်မယုံနိုင်စရာကောင်းသော application များ၊ ယနေ့ C Floating
C Floating သည် Android အတွက် application တစ်ခုဖြစ်ပြီး floating windows များမှတဆင့် multitasking လုပ်ခြင်းကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်။
အက်ဖ်ဘီအိုင်ကအက်ပဲလ်နှင့်ဂူဂဲလ်၏ iOS 8 နှင့် Android L တို့တွင်စာဝှက်အသစ်ပါသောဖုန်းများကိုအသုံးပြုခွင့်ပြုသည်
Eric Schmidt သည် Google မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်းစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအတွက်ထုတ်ကုန်ဒုဥက္ကpresident္ဌဟောင်း Jonathan Rosenberg နှင့်အတူ
Moto G သုံးသပ်ချက် - ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံး mid-range Android စမတ်ဖုန်းကိုစေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ခဲ့သည်
ဒီနေရာတွင် Moto G 2014 ကို Android ဗားရှင်းအနိမ့်ဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗွီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒီနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းနဲ့အတူနေဖို့ခေါ်ခံရတဲ့ terminal တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
LG က iPhone6Plus နှင့်၎င်း၏ကွေးနိုင်စွမ်းကိုလှောင်ပြောင်သည်
LG က troll တစ်ခုပါ။ အလွန်ကြီးစွာသော trolls ။ ကိုရီးယားတွေကတွန့်ဆုတ်မသွားဘဲ Apple နှင့်၎င်း၏ iPhone6Plus ကိုလှောင်ပြောင်သည့်တွစ်တာများကိုထုတ်ဝေကြသည်
Samsung Galaxy A5 သည်ယူရို ၃၅၀ အောက်သာရှိသည်
Samsung Galaxy A5 ၏ဈေးနှုန်းသည် ၃၁၅ မှ ၃၃၀ ကြားကြားရှိသည်။
Android back ခလုတ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုရှင်းလင်းစေရန်သဘောတရား
Chris Lacy ၏အဆိုအရ back ခလုတ်သည်ပိုမိုသင့်လျော်သော icon များဖြင့်ပိုမိုအသုံးဝင်သည်
Dyson 360 Eye, သင်ဖုန်းဖြင့်သင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်
Dyson သည် Dyson 360 Eye စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်တစ်ခုကို Roomba-type စက်ကိရိယာကိုသင့် Android ဖုန်းဖြင့်ထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးသည်။
Sony Xperia Z3 နှင့် Z3 Compact တို့သည်ဘက်ထရီသက်တမ်းအတွင်းမှတ်တမ်းအားလုံးကိုချိုးဖျက်သည်
ဘက်ထရီနှင့်ပတ်သက်လျှင်အနီးကပ်ချဉ်းကပ်သူမှာ Xperia Z3 နှင့် Xperia Z3 Compact တို့ဖြစ်သည်။
သင်၏ OneDrive အွန်လိုင်းသိုလှောင်မှုနေရာကိုအခမဲ့တိုးမြှင့်နည်း
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ OneDrive ကအခမဲ့ပေးထားသောအွန်လိုင်းသိုလှောင်မှုနေရာကိုမည်သို့တိုးမြှင့်ရမည်ကိုဆက်လက်ရှင်းပြသည်
သင်၏ Android သို့ငွေပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းသည် Yaap ငွေဖြင့်လွယ်ကူပါသည်
Yaap Money သည် Android နှင့် iOS အတွက်လျှောက်လွှာအသစ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းလ်တွင်ငွေလွှဲခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Android အတွက်ဗွီဒီယိုဖွင့်စက် ၄ ခုကိုသင်မမေ့နိုင်သော
ဒီနေရာမှာသင်မလွတ်နိုင်တဲ့ Android အတွက်ဗီဒီယိုဖွင့်စက် (၄) ခုရွေးချယ်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများရရှိရန်အခမဲ့ဗားရှင်း၊ pro ဗားရှင်းသို့မဟုတ် In-app ငွေပေးချေမှုများပါရှိသည်။
Android 4.0 နှင့်အထက်ရှိ Android multi-tasking ကိုတပ်ဆင်ပါ
ဒီမှာ Fancy Switcher, အခမဲ့ Android app တစ်ခုရှိပြီး Android 4.0 နှင့်အထက်ရှိမည်သည့်အလုပ်ကိုမဆိုလုပ်နိုင်သည်။
App Store အတွင်းဝယ်ယူမှု၏စျေးနှုန်းများနှင့်အတူ Google က Play Store တွင်အခန်းတစ်ခုကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်
ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန် Google သည် Play Store ထဲရှိစျေးဝယ်စာရင်းကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်
အံ့အားသင့်စရာ Android Apps: ILOCK Today
ILOCK သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏လုံခြုံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်မည်သူကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ရန်ကြိုးစားနေသည်ကိုသိရန်ခွင့်ပြုသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။
Lakento MVR၊ ယူရို ၆၀ အတွက် virtual reality မျက်မှန်များ
Lakento သည် virtual reality မျက်မှန်များဖြစ်သော Lakento MVR ကိုအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းဖြင့်ပြင်ဆင်နေသည့်စပိန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်
Cosmos, သင် SMS မက်ဆေ့ခ်ျကိုသုံးပြီးဝဘ်လှန်လှောခွင့်ပြုထားတဲ့ Android browser ကို
ROOT မပါပဲ Android volume control ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ
ဤတွင်အခမဲ့ ROOT ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကို ROOT မလိုဘဲ Android volume ထိန်းချုပ်မှုများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်ကူညီပါလိမ့်မည်
Jobeeper သည် Job Porter နှင့်အလုပ်တစ်ခု၏တစ်ခုတည်းသောအလုပ်တစ်ခုမှကမ်းလှမ်းသည်
Jobeeper သည် Android အတွက်အခမဲ့ application ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုအတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းကိုအလိုအလျောက်သိသာထင်ရှား။ အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့် interface ဖြင့် application တစ်ခုတည်းတွင်သင့်အားစုဆောင်းပေးသည်။
အံ့သြစရာကောင်းသည့် Android Apps: Dashdow WhatsApp
ဒီနေ့ကျွန်တော်သင့်ကို Android အတွက် DashDow WhatsApp ဆိုတဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးချပရိုဂရမ်အပိုင်းကိုအလှည့်မှာ WhatsApp မှ Facebook Messenger သို့အသိပေးချက်များလက်ခံရရှိရန်အထောက်အကူပြုသည့် application တစ်ခုတင်ပြချင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ Lenovo Vibe X2 ကိုစမ်းသပ်ပြီး
ယနေ့တွင်သင့်အားအာရှထုတ်လုပ်သူ၏ထင်ရှားသောအသစ် Lenovo Vibe X2 ၏ဗွီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုသင်ယူဆောင်လာသည်။
Android တွင်အခမဲ့ Wifi ဆက်သွယ်မှုကိုရနိုင်သည်
Instabridge သည် Android အတွက်တော်လှန်သောအသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ Wi-Fi ကွန်ယက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
[APK] နောက်ဆုံးပေါ် Hangouts အသစ်ပြောင်းခြင်းကို interface အသစ်နှင့်အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများဖြင့် download လုပ်ပါ
ဒီနေရာမှာ Hangouts မှာအခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအသစ်အကြောင်းအားလုံးကိုရှင်းပြတဲ့ဗွီဒီယိုတစ်ခုရှိတယ်
အဆိုပါ TAG Heuer စမတ်နာရီ
TAG Heuer ကသူတို့ကိုယ်ပိုင်စမတ်နာရီများသို့မဟုတ်စမတ်နာရီများကိုမည်သို့စတင်မည်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်
Spice Dream One - အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပထမဆုံး Android ဖုန်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
အိန္ဒိယတွင်ပထမဆုံးသောစမတ်ဖုန်း Spice Dream One ဖုန်းကိုယနေ့ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်သည်
Samsung က Apple နှင့်၎င်း၏ iPhone6Plus ကိုထပ်မံရယ်မောလိုက်သည်
Samsung နှင့် Apple တို့အကြားပြင်းထန်သောသွေးထွက်သံယိုမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးယခုအချိန်တွင် Samsung သည် Apple ၏ iPhone6Plus အားစီးပွားဖြစ်အသစ်တစ်ခုဖြင့်လှောင်ပြောင်ခဲ့သည်။
ပြီးပြည့်စုံသော built-in image editor နှင့်အတူနောက်ဆုံးထုတ် WhatsApp beta ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
ဤနေရာတွင်သင်သည် built-in image editor အသစ်နှင့်အတူ WhatsApp ၏ beta version အသစ်၏ apk ရှိသည်။
IFA14: အကောင်းဆုံးစမတ်နာရီ၊ အဆိုးဆုံးနှင့်အလွန်စိတ်ပျက်စရာ
ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာလင်တွင်ကျင်းပသော IFA14 ၏အကောင်းဆုံးစမတ်နာရီ၊ အဆိုးဆုံးနှင့်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာဖြစ်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုတွင်ထားခဲ့ပါသည်။
စမတ်ဖုန်းများအတွက်ကြိုးမဲ့ hard drive အသစ်များဖြစ်သော SanDisk Connect
SanDisk Connect ၏ကြိုးမဲ့ hard drives အမျိုးအစားသစ်ကိုပြသရန် SanDisk ပြခန်းသို့ကျွန်ုပ်တို့ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်
Moto X အသစ်
New Moto X ကိုဆန်းစစ်ခြင်း၊ ၎င်းသည် Samsung S5 ကိုခံနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်ထုတ်လုပ်သူ၏အဆင့်မြင့်သစ်ကိုဆန်းစစ်ခြင်း။
Samsung ၏ Galaxy Note ကို Edge
Samsung Galaxy Note Edge၊ ကွေးကောက်မျက်နှာပြင်ပါသည့်စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။
Samsung Galaxy Tab Active Samsung ရဲ့ Ultra-Resillable Tablet ကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်
Samsung Galaxy Tab Active, ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူများထဲမှခုခံနိုင်သည့်တက်ဘလက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်သည့်ဗီဒီယို
Samsung Advertising ကြော်ငြာ iPhone တိုက်ခိုက်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
iPhone6ကိုဖြန့်ချိပြီးတဲ့အခါမှာ Samsung ကလူသိရှင်ကြားကြေငြာပြီးအက်ပဲကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါတကယ်အလုပ်လုပ်လား
အသစ် Moto X နှင့်အတူပထမ ဦး ဆုံးတွေ့ကြုံ
ကတိက ၀ တ်ကပေးဆပ်ရမယ့်အကြွေးဖြစ်ပြီး Moto X အသစ်ကိုမင်းတို့ဆန်းစစ်ကြည့်မယ်
ဆမ်ဆောင်းက Apple ကိုရှင်းလင်းသောကိုးကားချက်များဖြင့်ဗီဒီယို ၆ ခုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ဆမ်ဆောင်းသည် iPhone အသစ်နှင့်အတူ Apple အသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောကိုးကားချက်များဖြင့်ဗီဒီယို ၆ ခုတင်ခဲ့သည်
Samsung Galaxy K Zoom, ဒါကိုဗွီဒီယိုမှာငါတို့ဆန်းစစ်တယ်
ယနေ့တွင်သင့်အားကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူမှစမတ်ဖုန်းနှင့်ကင်မရာအကြားစပ်စုထားသော Samsung Galaxy K Zoom ကိုဗွီဒီယိုဆန်းစစ်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပေးသည်
စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးအလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်သော Moto G အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
Moto G အသစ်ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ပိုပြီးတော့အကောင်းမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
၁၀.၅ လက်မ Samsung Galaxy Tab S ၏ဗွီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုသင်နှင့်ယူဆောင်လာရန် IFA 2014 မှကျွန်ုပ်တို့အခွင့်ကောင်းယူသည်
Samsung stand မှာသူတို့မျက်မှန်တွေကိုစမ်းသပ်ဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့တယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ Samsung Gear VR ကိုသင်ဆန်းစစ်လေ့လာနေတယ်
Qualcomm မှတန်ဖိုးနည်းသော Snapdragon 210 ချစ်ပ်ကိုထုတ်လုပ်သည်
Snapdragon 210 သည်ဈေးချိုသောချစ်ပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးယမန်နေ့က Qualcomm မှအနိမ့်ဆုံးထုတ်ကုန်များအတွက်ပေးခဲ့သည်
နောက်ဆုံးတွင် Xperia Z အတွက် Android 4.4.4 ကိုဘက်ထရီပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သည်
Android 4.4.4 ကို Vodafone France မှရရှိပြီးဘက်ထရီတိုးတက်မှုနှင့် firmware 10.5.1.A.0.283 နှင့်အတူပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်
၂ Apple ၏ iPhone2Plus အားအစားထိုးခြင်း
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ Apple ၏ iPhone6Plus အားလေးလေးနက်နက်ရွေးချယ်စရာနှစ်မျိုးရှိပြီးဖြစ်နိုင်လျှင်စျေးနှုန်းချိုသာသောဈေးနှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အရည်အသွေးတို့ကိုဖော်ပြပေးသည်။
Authy - အဆင့်နှစ်ဆင့်စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းကိုရိုးရှင်းစေသောအက်ပ်
အဆင့် ၂ ဆင့်ကိုလုံခြုံရေးအတိုင်းအတာအဖြစ်စစ်ဆေးခြင်းကိုနှစ်သက်သော်လည်း၎င်းသည်ပိုမိုရိုးရှင်းစေရန်လိုပါက Authy အက်ပလီကေးရှင်းကိုကြိုးစားအသုံးပြုရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းအင်စနစ်ဖုန်းနံပါတ် Pro ကိုစစ်ဆေးပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်
ကျနော်တို့စမ်းသပ်, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တို့ကို Energy Sistem Phone Pro ကိုမိတ်ဆက်ရှိရာဆောင်းပါး။
Tizen နှင့်အတူ Samsung ၏စမတ်နာရီသစ် Samsung Gear S ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်
မင်းအတွက် Samsung Gear S ကို Tizen ပါတဲ့ကိုရီးယားစမတ်နာရီသစ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါတယ်
Android အတွက် WhatsApp သည်ဖတ်မက်ဆေ့ခ်ျများ၏အသိပေးချက်ကိုစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်
Android အတွက် WhatsApp သည်ဖတ်မက်ဆေ့ခ်ျများ၏အသိပေးချက်ကိုစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်ဟူသောကောလာဟလကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားသောဆောင်းပါး။
Samsung Galaxy Note Edge၊ ကွေးကောက်မျက်နှာပြင်ပါတဲ့ Note4ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ခဲ့တယ်
သင့်အား Samsung Galaxy Note4Edge၊ Samsung ၏ကွေးကောက်မျက်နှာပြင်ပါသောစမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါမည်
၇ လက်မတက်ဘလက်တစ်လုံးသည် FCC သို့လာမည့်မျိုးဆက်သစ် Nexus7သို့လာရောက်မည်လား။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကတင်ဆက်မှုအပြီးတွင် ၇ လက်မအရွယ် Google သည် FCC သို့ရောက်ရှိလာသည်
Samsung Galaxy S4 / S5 အတွက်မပျက်စီးနိုင်သော CAT Active Signature Case Cover
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် Cat Active Signature အဖုံးများ၊ adonized metal နှင့် SAIF တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအဖုံးများနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုဗီဒီယိုတွင်သင့်အားပြသသည်။
စပိန်လို Samsung Galaxy Note4La Review
ကျွန်ုပ်တို့သည် Samsung Galaxy Note4ကိုဂျာမနီနိုင်ငံရှိအရေးအကြီးဆုံးနည်းပညာပြပွဲမှစက်တင်ဘာလ ၅ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိဘာလင်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော IFA 2014 မှစမ်းသပ်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့အပြင်းထန်ဆုံးစမတ်ဖုန်း: CAT S50 "The Rock"
IFA14 မှဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဘာလင်တွင်ကျင်းပသော IFA50 မှကမ္ဘာပေါ်တွင်ခုခံနိုင်စွမ်းအရှိဆုံးစမတ်ဖုန်းများကကျွန်ုပ်တို့ကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ၎င်း၏အမည် CAT SXNUMX ။
Samsung Galaxy Alpha, killer iPhone အသစ်ကိုငါတို့စမ်းခဲ့ပြီလား။
ကျွန်ုပ်သည် IFA 2014 ၌ဆက်လက်ရှိနေသေးပြီးယနေ့တွင်သင့်အား iPhone6၏ပြိုင်ဘက်အသစ်ဖြစ်သော Samsung Galaxy Alpha ကိုဆန်းစစ်လေ့လာပါလိမ့်မည်
Sony Xperia Z3 Compact ကိုစမ်းသပ်ပြီးဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါတယ်
ယနေ့တွင်သင့်အားမယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များပါသည့်ဆိပ်ကမ်းဖြစ်သော Sony Xperia Z3 Compact ၏ဗွီဒီယိုဆန်းစစ်ခြင်းကိုသင်ရရှိသည်
ယနေ့တွင်သင့်အားဂျပန်ကုမ္ပဏီ၏ထင်ရှားသော Sony Xperia Z3 ၏ဗွီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုသင်ယူဆောင်လာသည်
Sony Xperia Z3 Tablet Compact ကိုဗီဒီယိုဖြင့်လေ့လာသည်
ယနေ့တွင်သင့်အားထုတ်လုပ်သူ၏ ၈ လက်မတက်ဘလက်အသစ်ဖြစ်သော Sony Xperia Z3 Tablet Compact ၏ဗွီဒီယိုဆန်းစစ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပေးသည်
ဂူဂဲလ်မှဖန်တီးခဲ့သောဗီဒီယို ၅ ခုမှ "အိုကေ Google" အသံ command ၏စွမ်းအားအားလုံး
"Ok Google" သည် Google Now နှင့်စတင်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဂူဂဲလ်ဖန်တီးထားသောဗွီဒီယို ၅ ခုကိုပြသရန်ထောင်ပေါင်းများစွာသောမေးခွန်းများကိုမေးရန်အတွက်အသံအမိန့်ပေးချက်ဖြစ်သည်
2K resolution ရှိသောစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးသည်ထိုက်တန်သလော။ Sony ကဘက်ထရီအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကြောင့်ငြင်းဆိုခဲ့သည်
မေးခွန်းမှာ - ၂ ရက်ဘက်ထရီသက်တမ်းသို့ရောက်လျှင် (သို့) 2K resolution ဖန်သားပြင်ရှိသည့်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုကပိုကောင်းတယ်။
Motorola Moto X (၂၀၁၄) နှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သောဥပမာများ
ဒီ Motorola ဖုန်းအသစ်၏ကင်မရာအရည်အသွေးကိုပြသသည့် Moto X 2014 နှင့်ရိုက်ထားသောဥပမာအချို့ဓာတ်ပုံများ
Google က Nexus5ရဲ့ကျိုးပဲ့နေသော screen များကိုအခမဲ့ပြောင်းလဲပေးသည်
Google ကမနေ့ကအခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖွင့်ပြီး Nexus5မျက်နှာပြင်ပြန်လည်ပြိုပျက်သွားသည်။
Alcatel OneTouch သူရဲကောင်း၊ IFA နှင့် Android တို့ဖြင့်ဘာအသစ်လဲ
Alcatel ကို IFA 2014 တွင်တင်ဆက်ခဲ့ပြီး Android နှင့်အတူ Alcatel OneTouch Hero မိသားစုမှတက်ဘလက်နှင့်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုကိုတင်ဆက်ခဲ့သည်။
ZTE သည် IFA 2014 တွင်စမတ်ဖုန်းအသစ်သုံးခုကိုတင်ဆက်သည်
ZTE ကသူ့ရဲ့စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ်တွေကို IFA 2014 မှာပြသခဲ့ပါတယ်။ ZTE Blade VEC 3G နဲ့ 4G နဲ့ ZTE Kiss3MAX ကတော့စီးပွားရေးအသက်သာဆုံးပုံစံတွေပါ။
Samsung က ၈ လက်မတက်ဘလက်ကိုလုပ်နိုင်တယ် - Galaxy Tab Active
Samsung ၏တက်ဘလက်အသစ်ဖြစ်သော Galaxy Tab Active သည်ရေ၊ ဖုန်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုခုခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားသည်။
Lenovo က၎င်း၏ပထမဆုံး 64-bit စမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Lenovo Vibe Z2 ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Lenovo Vibe Z2 သည် ၄ ​​င်း၏ 64-bit ဗိသုကာနှင့် 8MP ရှေ့ကင်မရာတို့၏အကောင်းဆုံး selfies များကိုထင်ရှားစွာဖော်ပြသည်။
သင့်ဖုန်း၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - Sony QX30 နှင့် QX1 ကင်မရာမှန်ဘီလူး
Sony QX30 နှင့် QX1 adaptive ကင်မရာမှန်ဘီလူးများသည်သင်၏စမတ်ဖုန်းအတွက်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု: Chrome နှင့် CM Browser
ယနေ့ Android အတွက်အမြန်ဆုံး browser ကိုရှာဖွေရာတွင် Chrome နှင့် CM Browser ကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရသည်
Sony Xperia Z3 Tablet Compact ကိုတရားဝင်ကြေညာ
Xperia Z3 Tablet Compact သည်အထူ၊ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်နှင့် ၈ လက်မမျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်
ဒီမှာ Samsung Galaxy Note4ပါ
Samsung ၏ Galaxy Note4အသစ် အဘယ်အရာကိုယခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဖုန်းဖြစ်နိုင်သည်
Samsung Galaxy Note Edge၊
Samsung Unpacked Samsung Galaxy ပွဲကိုအံ့သြစရာသုံးခုနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ တစ်ခုကတော့ Samsung Galaxy Note Edge လို့ခေါ်တယ်။ ကွေးကောက်မျက်နှာပြင်ပါတဲ့။
Google ကရလဒ်များအတွက်အရောင်အသစ်များကိုစမ်းသပ်နေသည်။ ကုမ္ပဏီသည်ဘလူးနှင့်အစိမ်းရောင်အရိပ်အမျိုးမျိုးကိုပထမဆုံးစမ်းသပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။
မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု - Chrome နှင့် Dolphin Browser
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြန်ဆုံး web browser ကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပြီးယခုတစ်ကြိမ်တွင်မြန်နှုန်းမြင့်စမ်းသပ်မှုကို Chrome နှင့် Dolphin Browser နှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
Lenovo မှ ၈ လက်မအရွယ် 8-bit tablet Tab S8 ကိုမိတ်ဆက်ပြသခဲ့သည်
Lenovo Tab S8 တက်ဘလက်အသစ်သည် Intel ချစ်ပ်တွင်ထည့်သွင်းထားသော 64-bit ဗိသုကာအတွက်ထင်ရှားသည်။
Sony Xperia Z3 ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင် e-ink မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သော SmartBand Talk ဖြင့်ကြေးနီရောင်ပါ
ပုံရိပ်အသစ်တွင်တွေ့ရသော Xperia Z3 ၏ကြေးနီရောင်အပြင် SmartBand Talk စမတ်လက်ကောက်အသစ်ရှိသည်
Flow Home, Android အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော Launcher အသစ်သဘောတရား
ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော Launcher အတွက် Android အတွက်၎င်း၏အကြံပေးချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်အကြံပေးချက်ကို၎င်း၏ချန်လှပ်ထားခြင်း၊ Flow Home ဟုခေါ်သည်။
ဒီနေ့ Android အတွက်ဘယ် web browser ကဘယ်လောက်မြန်မြန်မြန်လဲဆိုတာသိချင်ရင် Chrome နဲ့ Firefox ကိုရင်ဆိုင်ချင်တယ်။
ရုရှားရှိ Media Markt မှ Galaxy Note4၏စျေးနှုန်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယခင် Note နှင့်တူညီသည်။ မည်သည့်နေရာတွင်မှအံ့သြစရာမရှိပါ။
Sony Xperia Z3 Compact ၏ ၃ ချက်ရိုက်ချက်
Sony ၏ Xperia Z3 Compact သည်ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးမတိုင်မီတစ်ရက်အလိုတွင်ပုံအသစ်များဖြင့်အပြည့်အ ၀ မြင်တွေ့ရသည်
သင်၏ GPS လှုပ်ရှားမှုရှိပါကဂူဂယ်လ်သည်သင်၏တည်နေရာလှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုတည်နေရာသမိုင်းတွင်မှတ်တမ်းတင်သည်
Vibe Z2 Pro နှင့်ရိုက်ထားသောပုံနမူနာများက Note4၏ကင်မရာမှဘာမျှော်လင့်မည်ကိုပြသည်
Vibe Z2 Pro တွင်ပါ ၀ င်သောကင်မရာသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ Note4တွင်နမူနာဓာတ်ပုံအချို့နှင့်အတူပေါ်လာလိမ့်မည်
Autoplay, အကြံပြုထားသောဗွီဒီယိုများကိုအလိုအလျောက်ဖွင့်ရန် YouTube လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်
အကြံပြုထားသည့်ဗွီဒီယိုများကိုအလိုအလျောက်ဖွင့်နိုင်မည့်သုံးစွဲသူအနည်းငယ်အပေါ် YouTube သည်အင်္ဂါရပ်အသစ်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
HTML Launcher၊ ပထမဆုံး HTML5 Launcher
ဒီနေ့ Android5 ကိုအခြေခံပြီးပထမဆုံး Android အတွက်ပထမဆုံး HTML5 Launcher ကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။
ရေအောက် ၂ မီတာအနက်ထိရောက်ရှိနိုင်သောတွစ်တာကိရိယာများကို Sony မှခန့်မှန်းထားသည်
Sony terminal အသစ်တွင်ပါ ၀ င်သည့် IP68 အသိအမှတ်ပြုမှုသည်၎င်းတို့၏တွစ်တာမှဖော်ပြသည့်အတိုင်းနက်ရှိုင်းသော ၂ မီတာအထိနစ်မြုပ်စေနိုင်သည်
Android Wear နှင့်အတူ Sony Smartwatch3ကို IFA14 တွင်ပြသမည်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီသည် Android Wear bandwagon သို့ ၀ င်ရောက်လာပြီး Sony Smartwatch 14 အသစ်ကို IFA3 တွင်ပြသမည်။
FonYou သည်သူ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ပိတ်ပြီးဖောက်သည်အားလုံးကိုသောင်တင်နေသည်
ကြေငြာချက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်း Fonyou က၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများရပ်တန့်သွားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏နံပါတ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမည်ကိုအကြောင်းကြားသည်
Snapshot ဖြင့် Android ကင်မရာကိုလျင်မြန်စွာရယူနည်း
ယနေ့ကျွန်ုပ်သည် Android အတွက်အခမဲ့လျှောက်လွှာကိုအကြံပြုပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Android ကင်မရာကိုလျင်မြန်စွာ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်အရေးကြီးသောအချိန်တစ်ချိန်လုံးမလွဲနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်
IFA 2014 မှာဘာတွေမြင်တွေ့နိုင်မလဲ။
IFA 2014 မှာတင်ဆက်မည့်သတင်းများနှင့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပို့ပေးပါမည်
Cabinet Beta သည်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းဖိုင်စူးစမ်းသူ
Cabinet Beta သည် Android 5.0 ဗားရှင်းအသစ်၏အတွေ့အကြုံကိုပေးသောပစ္စည်းဒီဇိုင်းဖိုင်စူးစမ်းရှာဖွေသူဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy Note4၏တရားဝင်ဝေါလ်ပေပါများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
တရား ၀ င် Galaxy Note4၏တရားဝင်ဝေါလ်ပေပါများကိုသင်၏ Android ၏ Desktop သို့ယူသွားနိုင်ရန်စစ်ထုတ်ထားသည်
OnePlus One သည်သုံးစွဲသူ၏အိတ်ထဲတွင်လောင်ကျွမ်းသွားသည်
OnePlus One ဖုန်းတစ်လုံးသည်ပဲရစ်မက်ထရိုကိုလမ်းလျှောက်နေသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏အိတ်ထဲတွင်လောင်ကျွမ်းသွားသည်
Motorola သင့်ရဲ့ android အတွက်အနာဂတ်စံပြအဖော်ကိုကျော်လိုက်ပါ
FCC သည် Motorola ဆက်စပ်ပစ္စည်းအသစ်ဖြစ်သော Motorola Skip ကိုအသစ်စက်စက်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးမိုဘိုင်းကိုသော့ဖွင့်ရန်နှင့်ရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ယခုငါတို့အကြိုက်ဆုံးစီးရီး Chromecast ကိုဖြောင့်!
ဤနေရာတွင်သင့်အား Play Store တွင်အကောင်းဆုံးအပလီကေးရှင်း၏နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုရရှိထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးစီးရီးများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင် Chromecast သို့တိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်သည်။
Samsung က 3-in-1 အားသွင်းကြိုးတစ်ခုကိုစျေးကြီးတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့လွှတ်တင်လိုက်ပါတယ်
Samsung Galaxy Note4၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Samsung Galaxy Note4၏ကင်မရာအင်္ဂါရပ်အားလုံးမှာပေါက်ကြားခဲ့သည်
AdAway ဖြင့် Android အက်ပ်များမှကြော်ငြာများကိုမည်သို့ပိတ်ဆို့ရမည်နည်း
ဤသင်ခန်းစာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android တွင် AdAway အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ထည့်သွင်းထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများ၏ကြော်ငြာကိုမည်သို့ပိတ်ဆို့ရမည်ကိုသင်ပေးပါမည်။
Xperia Z3 သည်တရုတ်အသိအမှတ်ပြုဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုတွင်ရှိသည်
ယခုအချိန်တွင် Xperia Z3 သည်ယခင်ကသိခဲ့သည့်အတိုင်း Z2 နှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပုံရသည်။
Xiaomi Mi4ကင်မရာဖြင့်ပထမဆုံးပုံရိပ်များကိုရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့သည်
ယနေ့တွင်သင့်အား Xiaomi Mi4ကင်မရာဖြင့်ဓာတ်ပုံများကိုဆက်တိုက်ပို့ပေးသည်
Sony ၏လှည့်သောကင်မရာပါသော selfie ဖုန်းအသစ်
Sony ၏ Android ဖုန်းအသစ်တွင် ၁၉.၂ MP လှည့်နိုင်သောကင်မရာနှင့် optical image stabilization တို့ပါ ၀ င်သည်
၎င်း၏ Android အက်ပလီကေးရှင်းတွင်ပေါင်းစည်းထားသော browser ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် Facebook စိတ်ကူး
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်၎င်း၏ Android အက်ပလီကေးရှင်းတွင်ပေါင်းစပ်ထားသောဘရောက်ဇာကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုပြီးအချို့သောသုံးစွဲသူများလက်ခံရရှိသည့်နောက်ဆုံးသတင်း
Android အတွက် Firefox သည် Chromecast အထောက်အပံ့ကိုရရှိသည်
Firefox သည်သင်၏ TV screen တွင် streaming ပြုလုပ်ရန်ညစဉ်ညတိုင်း Chromecast အထောက်အပံ့တွင်ပေးထားသည်
Sony က Xperia M2 Aqua ကို ၄.၈ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့်ရေစိုခံနိုင်သည်
Xperia M2 Aqua အသစ်သည်ဖောက်သည်များအားရေစိုခံဖုန်းဖြစ်စေရန်ဂျပန်ကုမ္ပဏီ၏လောင်းကြေးအသစ်ဖြစ်သည်
Sharp Aquos Crystal, ရှေ့ bezels သို့နှုတ်ဆက်သည်
Sharp ၏ရှေ့ပြေး bezels များအတွက်ထင်ရှားသော Sharp Aquos Crystal စမတ်ဖုန်းအသစ်များကိုပြသခဲ့သည်။
Amazon မီးဖုန်းသည်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုပြုပြင်ရန်မကြာသေးမီကမှအဆင့်မြှင့်ထားပြီး Android တွင်အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်
Samsung ရဲ့ Galaxy S5 Mini ကို
Samsung Galaxy S5 Mini ကိုလေ့လာခြင်း၊ ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူ၏နောက်ဆုံးပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သောဗားရှင်း
LG G Watch2စမတ်နာရီ [အသစ်ပြုပြင်သည်]
LG G Watch3ကိုစက်တင်ဘာလတွင်ဘာလင်မြို့ရှိ IFA ကွန်ဖရင့်၌ပြသမည်ဖြစ်သည်
SketchBook, အခြား Android terminal များအတွက်ယခု Samsung Galaxy Note3note application ကို download လုပ်ပါ
ဤတွင်သင့်တွင် SketchBook apk (သို့) တူညီသည် Samsung Galaxy Note3၏ Android မှတ်စုများအားလုံးကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသော application တစ်ခုရှိသည်။
၂ LG G2 Quick Circle အမှုမှပိုမိုရယူရန်အတွက်လျှောက်လွှာများ
ယနေ့ကျွန်ုပ်သည် LG G2 ၏ Quick Circle Case သို့မဟုတ် LG G3 ၏ Quick Window တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအထောက်အကူပြုမည့်အခမဲ့ application ၂ ခုကိုယူဆောင်လာပါမည်။
Meizu MX4 ကင်မရာမှာ Sony Xperia Z2 နှင့်အတူတူဖြစ်သည်
Meizu MX4 နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်အသစ်များသည်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီး၎င်းတွင်၎င်း၏ကင်မရာသည် 20 megapixel ရှိမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
Samsung Galaxy Alpha သည်စမတ်ဖုန်းများအတွက်ပထမဆုံး 20nm ချစ်ပ်ပါရှိသည်
Galaxy Alpha သည်ဒေသခံများနှင့်သူစိမ်းများကို၎င်း၏ကြော့ရှင်းသောဒီဇိုင်းဖြင့်အံ့အားသင့်စေခဲ့သော်လည်း Exynos 5430 20nm ချစ်ပ်အသစ်ကိုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဖုံးကွယ်ထားသည်။
Samsung Galaxy Alpha ၏သီးသန့်နံရံကပ်နံရံ ၉ လုံးကို download လုပ်ပါ
မနေ့က Samsung Galaxy Alpha အသစ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးယနေ့တွင်၎င်းအတွက်သီးသန့်နောက်ခံပုံများတပ်ဆင်ထားသည်
Samsung Galaxy Note4နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားသင့်သည့်အချက်များ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်စျေးနှုန်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည်
ဒီနေရာမှာလာမည့် Samsung Galaxy Note4နှင့်ကောလဟာလများနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့စျေးနှုန်းတို့ကိုယနေ့တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။
Galaxy Alpha ကင်မရာဖြင့်ပထမဆုံးရိုက်ကူးခဲ့သောဓာတ်ပုံများပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့မှာ Galaxy Alpha ကင်မရာဖြင့်ပထမဆုံးဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးသားပါ
Samsung Galaxy Alpha ၏ဈေးနှုန်းနှင့်စတင်မည့်နေ့ - Galaxy S5 ထက်စျေးနှုန်းချိုသာသည်
Samsung Galaxy Alpha သည် Galaxy S5 ထက်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ရုရှားနိုင်ငံမှယခုအပတ်တွင်ယူဆောင်လာမည်ဆိုပါကသိရှိရသည်။
HTC သည်၎င်း၏အက်ပ်များကို Zoe မှစတင်၍ ကျန် Android ဖုန်းများသို့ယူဆောင်လာလိမ့်မည်
သင့်ဖုန်း၏စိတ်ကြိုက်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အလွှာအတွက် HTC ၏ကိုယ်ပိုင်အက်ပလီကေးရှင်းများသည်မကြာမီ Play စတိုးတွင်ရှိတော့မည်
Navdy HUD, Android Auto ပြိုင်ဖက်
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာက Android Auto ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ပြိုင်ဘက် Navdy HUD ရှိပြီး၎င်းသည်တူညီသည်။
OnePlus One သည် CyanogenMod 11S ရှိကင်မရာအတွက် 'Clear Image' ရရှိသည်
OnePlus One သည်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ပုံ ၁၀ ပုံကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုပေါင်းစည်းထားသည့် "Clear Image" ဟုခေါ်သောပုံရိပ်ဖမ်းယူခြင်းစနစ်အသစ်ကိုယူသည်။
Xiaomi မှအခမဲ့ SMS စာတိုများအတွက်“ Cloud Messaging” app ကိုပြုလုပ်သည်
Xiaomi သည်၎င်း၏ Cloud Messaging app ကို Android terminals များတွင် activate လုပ်နိုင်သော option တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်သည်
Blackphone သည် ၅ မိနစ်အတွင်းအမြစ်တွယ်ခဲ့သည်
Blackphone ကိုအမြစ်တွယ်စေသောနည်းလမ်းကိုကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်က patch တစ်ခုဖြင့်ဖြေရှင်းပြီးဖြစ်သည်
Android မှ torrent ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးသုံးမျိုး
ဤနေရာတွင်သင့်အတွက် Android မှ Torrent ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းသုံးခုရှိသည်
ဂူဂဲလ်ပလေးဂီတသည်စက်ကိရိယာများအားခွင့်ပြုချက်အားတစ်နှစ်လျှင် ၄ ခုသို့ကန့်သတ်ထားသည်
Google Play Music ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ account နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော device ၁၀ ခု၏ကန့်သတ်ချက်ရှိခြင်းကြောင့်တစ်နှစ်လျှင် ၄ နှစ်ခွင့်ပြုချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်
သင့်တွင် LG G3 ကဲ့သို့ Quad HD resolution ရှိသည့်ဖုန်းရှိပါကသင်သည် YouTube ရှိ 1440p တွင်ဗီဒီယိုများကိုဖွင့်နိုင်သည်
Android application စတိုးသည်မည်သည့် Android 4.1 နှင့်အထက်မဆိုသုံးနိုင်သည်
ဤနေရာတွင်သင့်တွင် APK နှင့်ဗွီဒီယိုတစ်ခု ရှိ၍ ၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုမြင်နိုင်ရန်နှင့်အခြား Android မော်ဒယ်များတွင်တပ်ဆင်ထားသည့် Nokia application store ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိစမတ်ဖုန်းရောင်းချမှုနှင့် ပတ်သက်၍ Samsung သည် Apple ကိုပိတ်ပစ်လိုက်သည်
အမေရိကန်အရောင်းသတင်းများအရ Samsung သည် Apple ကိုလျှော့ချတော့မည်
သင်၏ Android ဂီတကို Apple iTunes နှင့်မည်သို့စည်းညှိရမည်နည်း
အကယ်၍ သင်သည် Apple ၏ iOS မှထွက်ပြီးမှောင်မိုက်သောအရပ်သို့သွားပါကစိတ်မပူပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် Apple iTunes ကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏ Android ဂီတကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ပုံကိုယနေ့ကျွန်ုပ်ပြသမည်။
Kyocera မှအသစ် Fragiphoniphobia နှင့် Hidro Life
Kyocera သည်စမတ်ဖုန်းကိုရေနှင့်လှုပ်ခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ Kyocera Hidro Life သည်ဤစမတ်ဖုန်း၏နာမည်ဖြစ်သည်